Gịnị bụ ihe ndị kasị mma obodo na France | Akụkọ Njem
France bụ mba jupụtara na ebe ndị mara mma ma mara mma nke ukwuu, tinyere obodo ya ndị na-eme njem nleta maka ihe niile ha nwere ike ịnye, site na ihe ndị mere eme na akụkọ ihe mere eme na mpaghara nwere ọmarịcha mma. Ọ bụ ya mere anyị ga - eji mee obere obodo kachasị mma na France, ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ otu n'ime ndepụta ndị a chọrọ inwe ebe ị ga-eleta na ọnwa ndị na-abịanụ, mgbe ihe niile laghachiri na nkịtị.
Anyị ga ahụ nke bụ ihe ndị kasị mma obodo na France, ọ bụ ezie na anyị ji n’aka na anyị ga-atụ uche ụfọdụ amụma. Na France enwere ọtụtụ obodo na-atọ ụtọ, ụfọdụ pere mpe ma na-anabata ndị ọzọ na ndị ọzọ bụ obodo nke anyị ga-anọ izu. Ya mere, rịba ama ebe niile ị ga-aga.
4 Asụsụ Bordeaux
Paris bụ isi obodo French na obodo ya kachasị mkpa yana otu n'ime ihe ndị kachasị mma, yabụ anyị ji n'aka na ọ bụ nke mbụ na ndepụta ahụ ma ọ bụrụ na ịgabeghị ya. Enwere ọtụtụ ihe ihe ị ga-eme na Paris, site n'ịhụ ifflọ Elu Eiffel iji otu ụbọchị gaa na Louvre Museum, lee ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ dịka Orangerie ma ọ bụ d'Orsay, gbagoo na Basilica nke Sacred Heart wee hụ mpaghara Montmartre, buru njem na Seine, banye na Notre Dame, gbagoo Arc de Triomphe ma ọ bụ na-agagharị n'okporo ámá ya na ubi ya iji bie ndụ French. Anyị ga-ahụkwa ndụ ya na kọfị, n'ihi na ọ bụ ihe a na-ahụkarị.
Obodo ochie a nke bụ isi obodo Gaul na Alaeze Ukwu Rom bụ ebe ọzọ ịga leta na France. Lyon nwere ihe magburu onwe ochie obodo na ebe chọta jewels dị ka nnukwu ụlọ ụka Senti nke Notre Dame de Fourviere na Romanesque, Gothic na ụdị nke Byzantine. The Vieux Lyon bụ ndị kasị ochie obi niile obodo, ebe ị pụrụ ịchọta ndị kasị mma ụlọ oriri na ọ restaurantsụ inụ na obodo. E hiwere obodo a n'oge Rom ma ọ bụ ya mere na anyị nwekwara ike ịchọta ụlọ ihe nkiri Rome oge ochie dịka Thelọ ihe nkiri Ancient nke Lyon site na 15 BC.
Marseille bụ ihe ọzọ mara mma French obodo kwesịrị ileta. N'ime ya, mpaghara dị ka ọdụ ụgbọ mmiri ochie ahụ pụtara, ebe aghọọla ezigbo ndị njem, ebe ị nwere ike ịnwale efere kachasị mma n'obodo ahụ ma jegharịa na-ekiri ọgba aghara nke ndị ọkụ azụ na ụgbọ mmiri. Gbanye Marseille ga-ahụ mpaghara Le Panier, ndị kacha ochie n’obodo ebe enwere ụdị ụlọ Provencal, obere ebe na okporo ụzọ. Marseille si nnukwu Katidral bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ncheta, na ihe mbụ Byzantine Romanesque ịke. Ọzọ nke ya isi nke mmasị bụ Fort Saint Jean n'ọnụ ụzọ nke Old Port ma ọ bụ ndị mara mma Boulevard Longchamp.
Bordeaux bụ otu n’ime obodo kachasị mma na France, obodo ebe a na-ahụ ọtụtụ ihe. Na Ebe de la Bourse bụ otu n’ime ihe ndị kachasị adọrọ mmasị, a mara mma square na narị afọ nke XNUMX French ije ebe anyị nwere ike ịhụ na-atọ Graces isi iyi na ama mmiri mirror. Katidral Saint Andre na Pey Berland Tower bụ ihe ọzọ ga-ahụ. Ọ bụ katidral nke so na French Camino de Santiago ma nwee ụlọ mgbịrịgba ahụ mara mma. The Pont de Pierre bụ akwa mmiri ochie nke Napoleon wuru n’elu Osimiri Garonne. Anyị ga-ahụrịrị narị afọ nke XNUMX Porte Cailhau, otu n'ime ọnụ ụzọ ámá ochie na mgbidi obodo.
Nke a bụ obodo ochie nke nwere mgbidi nke nwere ọhụụ. Ọ na-adị mfe gara na ngwụsị izu ma a na-ewere ya dị ka otu n'ime ihe kachasị mma na France. Bụ a ochie nnukwu ụlọ elu dị n'etiti ubi-vine ubi. Na mpụga mgbidi, ị nwere ike ịga na mpaghara Bastide de San Luis na Canal du Midi wee banye mpaghara nwere mgbidi iji laghachi n'oge oge ochie ahụ.
Versailles bụ otu n'ime ebe kachasị eleta na France n'ihi na ọ bụ nnukwu ogige nke Obí nke Versailles, ọrụ dị egwu. N'ime ụlọ eze ị nwere ike ịga na Gallery nke enyo, nnukwu ụlọ na-eju anya. Nwekwara ike ịhụ ụlọ dị nso na ebe dịka ubi ndị a gbara ogige. The Grand Trianon bụ obere-ọnụ ọgụgụ n'obí na-nwekwara ike gara na mgbagwoju.
Nantes dị nso na mpaghara Loire, amaara maka ụlọ ya ma bụrụkwa obodo kwesịrị nleta. Ọ bụ obodo nke Jules Verne na nke a emewo ka ihe okike nke Igwe Igwe, nke bu ihe itunanya ma ju kwa onye obula anya. N'aka nke ọzọ, n'obodo anyị nwere ike ịhụ lelọ nke Ndị Isi nke Brittany ma ọ bụ Katidral nke San Pedro na San Pablo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Obodo kachasị mma na France